Inkcazo:I-Android yeSihlalo se-Ibiza 2013,Umdlali weSihlalo se-Ibiza 2013,I-DVD yemoto yesihlalo se-Ibiza 2013
Home > Imveliso > Isihlalo se-Dvd seMoto ye-Android > Isidlali semoto seDVD yemoto yesihlalo seIbiza 2013
1. Nge-6.0.1 osulungekileyo ye-android, i-8 engundoqo, i-2G ye-RAM kunye ne-32G ROM, inokubaleka ngokukhawuleza nangaphandle kokutyibilika. Isidlali semoto seDVD yeMoto esiSitulo seIbiza 2013, yakha kwirediyo tuner ethi ngeengoma ezinkulu zerediyo, ixhase i-FM neRDS. I-DAB + irediyo yedijithali ayinakukhethwa. Isikhulisi seDVD yemoto ye-Android yeSitulo se-Ibiza 2013, i-IC yamkelwe eJapan, enesiphumo esihle sesandi, enokuhlangabezana neemfuno zakho ngokupheleleyo. Isidlali semoto seDVD ye-Android kwiSihlalo se-Ibiza 2013 senkxaso ye-HD 1080P yevidiyo yeVD kunye nokudlala okungaphelelanga. Isidlali semoto seDVD ye-Android yesihlalo se-Ibiza 2013 sinokuzikhuphelela izigidi zeapps ngokukhululekileyo. Isidlali semoto seDVD ye-Android eSihlalo se-Ibiza 2013 senkxaso ye-wifi 4g kunye nomsebenzi wesipili.
2. Kutheni ukhetha thina? Kuba singumzi-mveliso, ke sinako ukubonelela ngamaxabiso okhuphiswano. Sineenkqubo ezingqongqo zolawulo lomgangatho, iimveliso ziya kuvavanywa iiyure ezingama-24 ezipheleleyo ukuqinisekisa umgangatho ngaphambi kokuba sithumele iimveliso kuwe. Okokugqibela kodwa kungaphelelanga apho, imveliso yethu sele ifumene izatifikethi ze-CE, i-ROHS, i-FCC njl.
Uya kuzihambisa nini iimpahla emva komyalelo wendawo? Ngokwesiqhelo sinokukuthumela iimpahla zingaphelanga iintsuku ezingama-3-4 zokusebenza, ukuba akunako, inkonzo yethu iya kuqhagamshelana nawe ngexesha, kwaye ulandele iodolo yakho ngokukhawuleza ukuze ithumele iimpahla zakho ngokukhawuleza.
3. Uya kuyithumela imveliso ngeyiphi indlela yokuthumela? kwaye iimpahla ziya kufika nini? Iinkonzo zethu zobungcali ziya kukhetha eyona ndlela yokuhambisa (ehamba nemvume elungileyo kunye nexesha lokufika ngokukhawuleza) ngokwedilesi yakho yokuthumela. Ukuba unemfuno ekhethekileyo yendlela yokuhambisa, emva kokuba ubeke iodolo nceda unxibelelane nenkonzo yethu ngexesha.
Imifanekiso yeSidlali seDVD seMoto esiSihlalo seIbiza 2013:
Igumbi laseFektri kunye neSampuli
Izixhobo zeVidiyo yeMoto yeDVD yeMoto eSihlalo se-Ibiza 2013:
I-Android yeSihlalo se-Ibiza 2013 Umdlali weSihlalo se-Ibiza 2013 I-DVD yemoto yesihlalo se-Ibiza 2013 I-Android yeSonata ka-2013 I-Android yeCorolla 2016 I-Android ye-Elantra 2016 I-Android yeKadjar 2016 I-Android yeMazda 6 2017